Okwangoku, ukuqhambuka kwiPhondo le-Hebei kudlulile kwaye abantu babuyela kubomi bemihla ngemihla. Nangona kunjalo, ngenxa yeinshurensi, ummandla othile kusafuneka ubonise isatifikethi esibi sovavanyo lweentsuku ezisi-7 okanye iintsuku ezili-14 zeCovid-19. Umzi mveliso wethu uqalile kwakhona kwimveliso yesiqhelo kunye nomsebenzi. Samkela eyakho ...
ngomphathi ku 20-06-24
Inkulumbuso u-Li Keqiang uchophele intlanganiso yesigqeba seBhunga likaRhulumente ngomhla we-7 ku-Epreli, ukuphendula imeko enzima yesifo esimbaxa, intlanganiso igqibe kwelokuba i-127th Canton Fair izakubanjwa kwi-intanethi phakathi-ngasekupheleni kukaJuni. ICanton Fair yenye yeefeshini zokuqala ukuba bume ...
1. Okokuqala Nceda usixelele igama lemveliso okanye ukuba awunalo igama ungasithumela ipiks, okanye ungakhangela iwebhusayithi yethu ukufumana iimveliso ozifunayo. 2. Ukubonelela ngobungakanani beenkcukacha zeemveliso ozifunayo? Ucingo ubukhulu: igeji yocingo / ubukhulu; iphakheji: ubunzima, zingaphi iikhilogram enye c ...
Amanye amava kuthintelo nolawulo lwe-COVID-19
Ngoku i-Corona-virus isasazeka kwihlabathi lonke. Kutshanje sifumana iindaba ezininzi ezivela kubaxhasi malunga nemeko yamazwe abo. Siyazi ukuba abanye benu banexhala ngentsholongwane. Kwixesha elidlulileyo, sinamava afanayo nalawo uhlangabezana nawo ngoku. Sifuna ukwabelana ngamava nawe ...